Fivarinana tamin'ny hantsana :: Kamiao feno vokatra namono olona telo • AoRaha
Fivarinana tamin’ny hantsana Kamiao feno vokatra namono olona telo
Nivarina tany anaty hantsana, tany Ambatofolaka Miarinarivo, amin’ny lalam-pirenena voalohany ny kamiao iray feno vokatra avy any Tsiroanomandidy nikasa hiakatra aty an-drenivohitra, afak’omaly. Namoy ny ainy avokoa ny mpamily, ny mpanampy azy sy ny mpanofa ny fiara.
Tsy fantatra ny antony nahatonga ny loza, raha ny vaovao avy amin’ny mpitandro filaminana any Miarinarivo, izay nijery ifotony ny zava-nisy tany an-toerana. Nisy tamin’ireo razana no voalaza fa voatsindrin’ny entana. Ilay mpamily kosa namoy ny ainy noho ny dona mafy nahazo azy.
Kamiao an’ny mpivarotra monina etsy Anosibe tsena ity niharam-boina. Lehilahy, 31 taona, monina any Ambavahady Anosy-Tsiroanomandidy, kosa iry mpamily ny fiarabe, ary zaodahin’ny tompon’ny kamiao ihany ilay mpanofa ny fiarabe. Lehilahy monina any Manalalondo indray iry mpanampy ny mpamily, izay fahatelo tamin’ireo nindaosin’ny fahafatesana.
Loza an-dranomasina Olona fito maty narendriky ny botry
Fisamborana tetsy Ankazomanga Tovolahy voatondro ho isan’ny nangalatra volabe
Fiasafoana teny Ambolokandrina Mpangalatra tratra teo am-pilanjana vavahady vy
Fivadihana fiara Zaza telo volana namoy ny ainy teo am-pofoan-dreniny
Adina mpianaka :: Vehivavy novonoin’ny rainy teo an-tokotany
Famoronana fanafihana :: Mpitazona “cash point” nangalatra vola 4 200 000 ariary